Ụbọchị My Pet » M nwere ike kwere m Ịzụ Nke a Book
M nwere ike kwere m Ịzụ Nke a Book
emelitere ikpeazụ: oké osimiri. 24 2020 | 6 min agụ
Afọ iri gara aga, ọ dịghị onye ga na-eche na ihe kasị mma na kacha ụzọ izute ndị ga-abụ site na a na kọmputa. Ọfọn, maa amụma? Ọ bụ. January 2002: iri na otu nde mmadụ gara online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị weebụsaịtị. July 2002: iri na asatọ nde mmadụ gara online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị weebụsaịtị. December 2002: iri atọ na ise nde gara online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị weebụsaịtị. Ka 2003: iri anọ na ise nde gara online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị weebụsaịtị (comScore Media Metrix, New York Times, June 30, 2003). Nke ahụ bụ ihe 40 percent niile na-alụbeghị di toro eto na-America. Ma n'agbanyeghị na uzọ na nke a bụ a na-eto eto onye na-ajụ, n'elu afọ otu n'usoro nke mmeba bụ ndị inyom, iri atọ na ise na-iri anọ na anọ, soro ndị mmadụ, iri atọ na ise na-iri anọ na anọ. Ihe ọzọ nnukwu ìgwè? Ndị ikom na ndị inyom, iri anọ na ise na-iri ise na anọ (Yahoo, Inc., September 2002).
Ihe mere na Internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị skews tọrọ Internet Ịgba Cha Cha ndị doro anya. Single iri atọ somethings agbasaghị inwe busier na ndị ọzọ ego nchebe, nke pụtara na-arụ ọrụ dị mkpa, ma otú bụ ịhụnanya, nke mere na-akwụ ụgwọ maka ọrụ abụghị ihe nke. Ọzọ, ndị ha na ngwụsị m zitere na-enwe mmetụta na nrụgide na-alụ na nwere ụmụ. Mmụba nke katatụrụ oru ekwesịghị-abịa dị ka ukwuu nke a anya ma. E nwere ihe karịrị nde iri abụọ divorcees si n'ebe, m ga-eche na mmanya idaha dị nnọọ nta na-adọrọ mmasị mgbe ị na-onwe gị oriri ya na gị na na’ enyi.
Nke a bụ dị ka ihe ọma dị ka Ọ na-Alụta?
Dị ka Ubiquitous dị ka Internet aghọwo, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ka a daring nzọụkwụ maka ọgbọ nke ndị na-agba nkịtị ka ndị ọzọ omenala ụzọ nzute. Ma nke bụ eziokwu na ndị ọzọ nzute na-ọzọ ike adịghị eme ka ha na-apụtụghị elu. Chee echiche banyere ya. Ebee ka ndị mmadụ na-ejikarị izute nwunye ha?
Ogwe? Yeah, ị hoo haa nwere ohere ka mma nzute “onye” ọ bụrụ na ị mmanya na-egbu. Ma onye ọ bụla maara na ndị kasị mma ndị fechapụta mgbe niile ná Ogwe. (Ọ bụghị ihe ọ bụla pụọ ​​casinos na akwụna nke anyị mba uku.)
Nnọkọ Oriri na Ọṅụṅụ? Dị ka Ogwe ma e wezụga na free booze na yabasị itinye. Ma ọ gwụla ma ị na na na na nnọọ mara mma, obi ike, ma ọ bụ ire ụtọ, buru onye na awa ole na ole na otu bụghị mgbe niile ihe kasị mfe ime. Inwe ike ịjụ, “Olee otú ị maara usu?” na-enye ndị ọzọ a nta ihu n'elu Ogwe.
Ọrụ? Eziokwu: na-agbasa a ọrụ ibe ga-emebi ihe ọ bụla nke ntakiri ụtọ pụrụ ịbụ na ị na mbụ nwere na ọrụ. Na nghoputa na m chepụtara m na isi, 86 percent nke ndị bi na ga-kama ịbụ na-enweghị ọrụ karịa ọrụ na otu ụlọ ọrụ dị ka onye bụbu. Nke ahụ bụ ụfọdụ ihe àmà doro anya megide interoffice mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nri e.
Church? Ị na-eche gị mkpa ịdị ezigbo na a mmanya? Gbalịa na-mmadụ digits na House nke Chineke, karịsịa ma ọ bụrụ Morn na papa m na na-ọdụ nri na-esote gị bu n'obi ga-eme n'ọdịnihu ma ọ bụ nwunye. Jụọ onwe gị: ihe ga-Jesus eme? M guessing ọ ga see Internet nakwa.
Mere ndokwa alụmdi na nwunye? A bit ochie, ikekwe, ma wepụ mmewere nke oke maa na-eme ka akpa a dum otutu mfe. Big gbakwunyere. Ka anyị nọgide na nke a dị ka a “atụle.”
Kpuru ìsì ụbọchị? Aga m eburu m onwe losers, daalụ.
Na na na, ya mere ihe anyị nwere n'ebe a? Mere ndokwa alụmdi na nwunye ma ọ bụ Internet? A ngwa ngwa show nke aka na-ekpughe na ọtụtụ ndị America ka tụkwasịrị obi obi ha onwe ha emu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị instincts karịa ndị mụrụ ha’ emu mkpakọrịta nwoke na nwaanyị instincts. Ya mere, mere ndokwa alụmdi na nwunye bụ na Internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Enwee Mmeri.
Ịtụnanya, a democratic usoro nke anyị.
All njakịrị wezụga, mkpakọrịta nwoke na nwaanyị online dị mfe ma dị ọnụ ala karịa nke niile dị n'elu nhọrọ. Easy na ọnụ ala na-adịghị abụọ okwu ị chọrọ iji na-akọwa onwe gị, ma ha na zuru okè n'ihi na anyị online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nzube. N'ihi otu na iri ise dollar i nwere ike ịfụ mmanya na a Obodo mmanya na a Saturday abalị ka na-eru nso nnọọ onye ọ bụla, i nwere ike ọnwa isii nke na-enweghị nsọtụ emailing na AmericanSingles.com. Ọzọ, obibia bụ mfe (ị na-adịghị ga-enwe suave ghota na-elu-akara), na jụrụ bụ mfe (ochie ọṅụṅụ na-na-na-na ihu ihe dị nnọọ adịghị arụ ọrụ karịrị kọmputa), na ihe ịga nke ọma ọnụego bụ elu (n'ihi na onye ọ bụla na saịtị ndị a bụ otu, ka megide ọtụtụ mmanya patrons ndị dị nnọọ ka nwere fun na ndị enyi ha).
Otú ọ dị, isi uru nke Internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị bụ nke a: na ị na-na-amata ọdịnihu gị nwunye / di enyi nwoke / ịkwakọrọ oku tupu ị izute ya / ya. Nke a dị ịrịba na ọ bụ ndị kwesịrị n'ihu ngagharị.
Anyị niile maara mkpa nke ahụ mara mma na a mmekọrịta. M na nwere enyi atọ onye oké njọ ndụ na-mmekọrịta dara iche kara aka enweghị ibe mmekọahụ mmasị. Ya mere m na ọ bụghị ịgọnahụ na intangible ebua na anyị niile na oku na-aga “onwu” bụ ihe dị oké mkpa akụrụngwa a budding mmekọrịta. M na-ekwu, Otú ọ dị, otú ahụ ka i izute onye nwere ike kpebiere N'ezie gị dum mbụ mkparịta ụka, ọdịnihu gị interactions, ya mere na, ndị ọzọ nke ndụ gị.
Text: “Ebe Ahụ, M Fred.” Subtext: “Enwere m ike ịhụ Ị ọtọ?”
M nwere a Ozizi banyere ihe mere ọ bụ ya mere incredibly ike izute ndị na Ogwe na ndị ọzọ. Ọ na-arụ ọrụ ihe dị ka nke a:
Ọ bụ Saturday n'abalị. Ụmụ Okorobịa’ n'abalị si. Girls’ n'abalị si. Onye ọ bụla nwere a sọrọ purpose-(a) fechapụta na ndị enyi na (b) izute onye nke na-abụghị mmekọahụ. Ọ bụrụ na ị a Ihọd, kacha nke oge ị na-aga n'ụlọ-agba aka bịa. Ma eleghị anya, ị na-agwa onye, ma eleghị anya, ọ bụghị, ma eleghị anya, ọtụtụ n'ime abalị gị e mefuru na-agwa gị buddies banyere otú na-ekpo ọkụ na-apụghị iru ndị inyom niile na-ele anya na otú ịrịba ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na i nwere obi gakwuru otu n'ime ha. Ọ bụrụ na ị a nwaanyị, na eleghị anya nọrọ n'abalị egbochi ọganihu nke ụwa isii slimiest ụmụ okorobịa, ndị na-otú dịghịzi jụrụ na, mgbe otu n'aka gị, ha ozugbo wee ise ụkwụ ala mmanya see na-esote kasị mma nwaanyị ha nwere ike ịhụ. Yep, ọ bụ a anụ ahịa si n'ebe, ma ole na ole ndị na-eme ihe ọ bụla àgwà nzukọ. A bụ ebe m na tiori kicks na.
Omenala, ọ bụ nwoke na ọrụ ịgakwuru a nwaanyị a mmanya ma ọ bụ ọzọ. Ọ pụrụ ime nke a na a ọtụtụ ụzọ. Buru-elu edoghi ndị na-emekarị a ezi mmalite. Otu nwere ike agbalị mgbe nile ndị a surefire mmeri:
“M maara mmiri ara ehi na-eme a ahu ezi, ma nwa, ole na-eme kemgbe na-aṅụ?”
“Ì kweere na ịhụnanya na mbụ n'anya, ma ọ bụ ka m kwesịrị ije ije site na ọzọ?”
“Enwere m ike nwere foto nke ị na-, otú m nwere ike na-egosi Santa ihe m chọrọ n'ihi na Christmas? “
“Nice akpụkpọ ụkwụ. Wanna nwee mmekọahụ?”
Ma ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-dị ka maa mma na ezi obi dị n'elu ka edoghi ga-egosi, dị ka mmadụ, na ị na-malite na a siri ike ọnọdụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-ekwu ihe dị mfe ma na-egbu dị ka, “Ebe Ahụ, M Evan,” dị nnọọ site na-eru nso a nwaanyị, ị na-eme otu ihe doro nnọọ anya: Ị chọrọ ga-esi na ya ogologo ọkpa. Ọ maara na ọ. Ị maara ya. N'agbanyeghị otú ị n'ihe ndina ya, nke a bụ eziokwu bụ ihe mere unu n'elu ya ka na-amalite.
Ugbu a ma ọ bụrụ na ị chọrọ extrapolate ihe ọbụna n'ihu, ị pụrụ ọbụna na-asị na nke abụọ ị na-agakwuru nwanyị, O nwere ike nke ọma ga-atụle ma ị na-aga ịbụ nna nke ụmụ ya. Unu na-achị ọchị. Ọ bụ eziokwu. Ma nke ahụ bụ a otutu ọnọdụ maka a Ihọd. Karịsịa ma ọ bụrụ na i kweere na fabled factoid na nwanyị na-eme ka elu ya n'obi n'ime ise sekọnd ma ọ bụrụ na ọ ga-chọrọ na-ehi ụra na gị. Na eziokwu, a Ihọd enweghị sịnụ na n'okwu. Ma nke ahụ adịghị kwụsị ya si na-agbalị. N'ihi ya, ọtụtụ puku iru ala mkparịta ụka ọ bụla ụbọchị na-aṅụ iche gafee America, ukwuu ka wutere nke niile ọzọ aka, ma e wezụga n'ihi bartenders, ndị ji obi ụtọ mmiri iri ọ bụla nke si sorrows na ọnụ n'elu-shelf mmanya.
N'ezie, onye ọ bụla nke na nwoke a na / nwaanyị / mmekọahụ / alụmdi na nwunye subtext ike-atụle. Kama na-amanye anyị na-agba egwu a iberibe mating agba egwú nke werewooro ọnọdụ ruo ọtụtụ puku afọ, ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ebe ọ bụ na biakwa obibia nke mmanya idaha. Olee aghụghọ nwere ike ị ga na-eme obere okwu na a na-amatụghị onye? N'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ, Azịza ya bụ na “adịghị nnọọ.”
Nke mere na-atụtụ onye na a mmanya ma ọ bụ ndị ọzọ na-adịghị nke dabeere ihe ọ bụla karịrị a mbụ echiche. Nke mere na ata ụwa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị eme nzuzu na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị iwu. Nke mere na ị na-agụ akwụkwọ a na-amalite na. Ma, ị maara na.
Tule na “tụtụlite” na iji nwayọọ, ihe na usoro nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na gị onwe gị kwa pụrụ imesị dị ka enyi m Teresa (a ọhụrụ Internet mkpakọrịta nwoke na nwaanyị tọghatara), onye na nso nso wee sị m na ekwentị: “N'oge gara aga, m ga-esi n'ime a mmekọrịta na mgbe ahụ ga-esi mara onye m na-akpa. Ugbu a, m ga-esi mara onye tupu m nwoke akpawa ha.” Trite, ma ezi. Olee mgbe i zutere a n'otu ụlọ mmanya, enwetatụbeghị a na nọmba ekwentị na a nsusu ọnụ, na mgbe ahụ malitere na-amụ banyere onye ọ bụla ọzọ n'oge ndị sochirinụ mbụ ụbọchị? Otú ọtụtụ ugboro nwere i mikpuru onwe ya n'ihe a mmekọrịta n'ihi na onye ahu mara mma na-enweghị ọbụna na-atụle ma unu abụọ bụ dakọtara? Iji na-etinye ya ihe n'ezoghị ọnụ, ònye n'ime anyị adịghị nwere mmekọahụ na onye amadịghị agba nke anya-ya abua? Ma ọ bụ ma o nwere ụmụnne? Ma ọ bụ toro na ụmụ? Ma ọ bụ ogologo oge ọ na-a si na parole?
Atụla ihere. Ọ na-akpọ ụmụ mmadụ nke. Ma nanị n'ihi na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na-achọ na-awụlikwa elu n'ime nchupu na a cute ọbìa, mgbagha na-achọ ka àgwà dị otú ahụ ọ bụghị mgbe nile iru kasị ntọala siri ike ruo ogologo-okwu mmekọrịta. Na ọ bụ ihe anyị na-niile mgbe, ọ bụghị ya? Ọfọn, ọ bụghị ya?
Ezi, dịghị aza na.
4 Ike àgwà Obi ụtọ na Mmekọrịta